A napụtara Sera n’aka Abimelek (1-18)
20 Ebreham si n’ebe ahụ kwaga+ na Negeb* wee biri n’agbata Kedesh+ na Shọọ.+ O bikwara* na Gira.+ Mgbe o bi n’ebe ahụ, 2 o kwuru ọzọ na Sera nwunye ya bụ nwanne ya nwaanyị.+ Abimelek eze Gira wee zie ozi, a kpọtara ya Sera.+ 3 Mgbe e mechara, Chineke bịakwutere Abimelek ná nrọ n’abalị, sị ya: “Ị nwụọdịla anwụọ n’ihi nwaanyị ahụ ị kpọọrọ,+ n’ihi na ọ bụ nwunye nwoke ọzọ.”+ 4 Ma, Abimelek agabeghị ya nso.* N’ihi ya, ọ sịrị: “Jehova, ị̀ ga-ebibi mba aka ha dị ọcha? 5 Ọ̀ kwa ọ sịrị m, ‘Ọ bụ nwanne m nwaanyị’? Ọ̀ kwa nke nwaanyị sịkwara m, ‘Ọ bụ nwanne m nwoke’? Ebughị m ihe ọjọọ n’obi mee ihe a, aka m dịkwa ọcha.” 6 Ezi Chineke wee sị ya ná nrọ: “Ama m na i bughị ihe ọjọọ n’obi mee ihe a. Ọ bụ ya mere m ji gbochie gị imehie m. Ọ bụ ya mere na ekweghị m ka i metụ ya aka. 7 Ugbu a, kpọghachiri nwoke ahụ nwunye ya, n’ihi na ọ bụ onye amụma,+ ọ ga-arịọkwara gị arịrịọ+ ka ị dịrị ndụ. Ma ọ bụrụ na ị kpọghachighị ya, mara na ị ga-anwụrịrị, gị na ndị obodo gị niile.” 8 Abimelek biliri n’isi ụtụtụ kpọkọta ndị niile na-ejere ya ozi ma kọọrọ ha ihe a niile. Ezigbo ụjọ wee jide ha. 9 Abimelek kpọziri Ebreham, sị ya: “Gịnị bụ ihe a i mere anyị? Olee ihe ọjọọ m mere gị i ji chọọ ime ka mụ na ndị m na-achị mee nnukwu mmehie a? Ihe i mere m adịghị mma.” 10 Abimelek jụkwara Ebreham, sị: “Gịnị ka i bu n’obi mee ihe a?”+ 11 Ebreham sịrị: “Ọ bụ maka na m sịrị n’obi m, ‘N’eziokwu, ndị obodo a anaghị atụ egwu Chineke. Ha ga-egbu m ka ha kpọrọ nwunye m.’+ 12 Ma n’eziokwu, ọ bụ nwanne m nwaanyị. Ọ bụ otu nna ji anyị, ma ọ bụghị otu nne mụrụ anyị, m wee lụọ ya.+ 13 N’ihi ya, mgbe Chineke si n’ụlọ nna m zipụ m,+ m sịrị ya: ‘Otú a ka ị ga-esi gosi m na ị hụrụ m n’anya:* Ebe ọ bụla anyị gara, ị ga-agwa ndị mmadụ na m bụ nwanne gị nwoke.’”+ 14 Abimelek wee kpụrụ atụrụ na ehi kpụnye Ebreham, kpọnyekwa ya ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-eje ozi. Ọ kpọnyekwara ya Sera nwunye ya. 15 Abimelek gwakwara ya, sị: “Ala a niile bụ nke m. Biri ebe ọ bụla dị gị mma.” 16 Ọ sịkwara Sera: “M na-enye nwanne gị nwoke otu puku (1,000) mkpụrụ ego ọlaọcha.+ Ọ bụ ihe ga-egosi ndị ezinụlọ gị niile na ndị niile ọzọ na aka gị dị ọcha, e kwesịghịkwa ịta gị ụta.” 17 Ebreham rịọsiri ezi Chineke arịrịọ ike. Chineke wee gwọọ Abimelek na nwunye ya na ndị ohu ya nwaanyị, ha amalitekwa ịmụ ụmụ, 18 n’ihi na Jehova mechiburu akpa nwa ụmụ nwaanyị niile nọ n’ezinụlọ Abimelek n’ihi Sera, nwunye Ebreham.+
^ Ma ọ bụ “Ọ bụkwa onye mbịarambịa.”
^ Ya bụ, ya na ya enwebeghị mmekọahụ.